Akụkụ Ahụike Ọgwụ, Nkà na ụzụ Ngwọta | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 13, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu a bụ ezigbo nsogbu na ọrụ. Ekwenyesiri m ike na m rụrụ ọrụ karịa oge 100 - na abịaghị nso itinye nkụkpọ na ndepụta m nke ihe ga-agwụ.
Maka ịdị mma, m na-agbakarị ịkwụsị ihe m ga-emerịrị ma mee ihe dị iche. Ọ bụ akụkụ nke àgwà m - enyi m Pat kpọrọ ya ndi nwe ya. 🙂
Otu izu ma ọ bụ karịa gara aga, ezutere m otu enyi m iji kwurịta ịmepụta saịtị ọhụrụ mana jiri ya Twitter si API ka n'ezie ikwommiri. Nwanyị ọhụrụ m bụ Ọ bụrụ na ara.
Achọrọ m ịmụ API nke Twitter, na mbụ. N’izu ụka a ka m mere nke ahụ. Ọ bụrụ na ara bụ a quirky obere search ngwa nke ga-achọ ihe ọ bụla na eme nzuzu iji Google. Otú ọ dị, akụkụ dị jụụ bụ na ọ na-akwado ọnụ ọgụgụ ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara nzuzu!
Ndị ọbịa, n'ọtụtụ akụkụ, na-eme omume ọma. Amalitere m ihe ndebanye maka okwu na nkebi ahịrịokwu, yana listi nzacha maka adreesị IP ndị ahụ agaghị akwụsị ịbụ mkparị. M na-enwe ekele maka ọchị nke ndị ọbịa nwere - m dị mma n'etiti iPhone na iPod Touch. (Mee ka ọ dị n'etiti Ann Coulter na Hillary Clinton na mbido ngwụsị izu.) Ma n'ezie, nke mbụ ị nweghị isi na-apụta site n'oge ruo n'oge.
Na-eziga na Ọ bụrụ inu akaụntụ Twitter ama esisọn̄ mi etieti. Mana nke kachasị sie ike bụ ịmepụta ụzọ iji dọpụta Twitters nke ndị ọzọ na-edeghachi na weebụsaịtị Weebụ. Iji mee ya, enwere m ọrụ Cron nke na-enyocha ya API API sekọnd ọ bụla na ndekọ na-egosipụta nke ọ bụla Tweets laghachi na saịtị ahụ, na-edekọ ndị ọhụrụ ọ bụla.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ Twitter ihe ị chere na ọ dị nzuzu, tụfuo tweet na @ifsuck. Ọ bụrụ na ị chọrọ ile ihe na eme nzuzu nile ụbọchị na ihe niile oge (Ron Paul bụ # 1), mgbe ahụ gaa na Ọ bụrụ na ara.
Jenụwarị 14, 2008 na 9:35 PM
Isi ihe a bụ iji chịkọta ihe ndị mmadụ tinyere na ntanetị wee kpọọ ha ngụkọta na oge na-adịbeghị anya? Ọ bụrụ na edemede gị kwesiri ịchọ “eriri” eme nzuzu, ọ naghị eme nke ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ aghụghọ iji mee ka ndị mmadụ jiri ya (nke ọma, ọ rụrụ ọrụ na m) iji hụ ugboro ole ụfọdụ ahịrịokwu ụfọdụ abanye, mgbe ahụ ọ na-arụ ọrụ.
Echere m na m a bit “ihe arụmọrụ” ma m obiọma na-atụ anya na ọ bụrụ na m na-etinye na “lollipops” na engine ga-achọ Nchikota “lollipops” na “eme nzuzu”.
You makwaara, ọ bụrụ n ’ị na-ede nzuzu na-ezukarị, ọ ga-amalite ịdị ọchị ...
Jenụwarị 14, 2008 na 9:58 PM
Ezigbo ihe, Bob, bụ naanị iji wuo ihe jikọtara na Twitter nke API. Emebeghị m ya tupu oge eruo ma chọọ iji ụbụrụ m rụọ ọrụ (ntakịrị).
Ihe ọchị bụ naanị ile ihe ndị mmadụ na-eche nzuzu - site na anya na nso nso a ruo ogologo oge. Enweelarị ntakịrị ihe na Twitter, ebe ndị folks na-eji ya iji kwupụta banyere ọrụ, ndụ, teknụzụ, wdg.
Ikiri ya bụ ihe na-atọ m ụtọ. Dị ka iju mmiri nke NFL metụtara posts n'oge egwuregwu football. Ndị mmadụ n'ezie na-egosipụta site na ngwa ahụ!
More ịbịa na ụdị ngwa a. Nke a bụ n'ezie naanị nnwale, ezigbo ngwa ahụ ga-adị ntakịrị n'okporo ụzọ!
Jenụwarị 15, 2008 na 3:08 PM